Trump ayaa sheegay in dalka Sudan uu ka sari doono liiska dowladaha taageera argagixisada haddii… – Hagaag.com
Trump ayaa sheegay in dalka Sudan uu ka sari doono liiska dowladaha taageera argagixisada haddii…
Donald Trump, Madaxweynaha Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in Sudan uu ka saari doono liiska dowladaha taageera argagixisada, haddii ay bixiso magdhow dhan saddex boqol, soddon iyo shan milyan oo dollar ($335,000,000)
Madaxweynaha Mareykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in lacagtaasi la siin doono dadka Mareykanka ee waxyeelada ka soo gaartay weerarada argagixisada iyo qoysaskooduba.
“Waa war wanaagsan, dowladda cusub ee Sudan oo horumar weyn sameynayso. Waxayna ogolaatay inay saddex boqol, soddon iyo shan milyan oo dollar siiso dhibane-yaasha argagixisada Mareykanka iyo qoysaskooda. Marka la bixiyo lacagtaasi waxaan ka saari doonnaa Sudan, liiska dowladaha taageera argagixisada.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale yiri “Ugu dambeyn waa cadaaladda dadka Mareykanka ah iyo tallaabo weyn oo loo qaado Sudan.”
Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa haysta 45 maalmood uu wax kaga yiraahdo tallaabada uu Aqalka Cad liiska wadamada taageera argagixisada kaga saarayo dalkaasi Sudan.
Ra’iisal Wasaaraha Sudan, Abdalla Hamdok ayaa dhankiisa sheegay in dhaqaalahaasi la wareejiyay, balse aanay jirin wax cadayn ah oo muujinaya in Mareykanka uu si deg deg ah u helay dhaqaalahaasi.